Isbitaalka Guud ee Baydhabo oo hay’ad Switzerland ah dayactir guud ka fulin doonto – idalenews.com
Wasaaradda horumarinta adeega bulshada Agaasinkeeda caafimaadka iyo hay’ad samafal oo laga leeyahay Wadanka Switzerland ayaa kala saxiixday heshiis ku aadan sidii hay’adaasi dayactir iyo kaalmo caafimaad uga fulin lahayd Isbitaalka guud magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
Isu duwaha caafimaadka ee Baydhabo Yuusuf Barre Maxamed oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa shaaca ka in hay’adda fadhigeedu yahay dalka Switzerland ay kala saxiixdeen heshiis ku aadan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen shaqaaleysiinta howlwadeenada caafimaad ee ka howgalla isbitaalka iyo sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa isbitaalka Baydhabo.
“Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay noo qabanayso hay’adda waxaa ka mid ah in qeybo kamid ah isbitaalka ay la wareegto gaar ahaan qeybta carruurta iyo tababar siinta shaqaalaha isbitaalka ka howlgalla” ayuu Yuusuf hadalkiisa ku daray.
Isu duwaha caafimaadka ee Agaasinka caafimaadka ee Wasaaradda Adeega bulshada Yuusuf Barre ayaa xusay in arrintaasi ay si wadajir ah u qabteen Agaasimaha Isbitaalka, wakiilo ka socday hay’adda iyo Isu duwaha caafimaadka, isagoo intaa ku daray in isbitaalka uu hadda awood u leeyahay u adeegida bulshada ku dhaqan gobolka.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa mudooyinkii uu dambeeyay ka jirtay baahiyo caafimaad, iyadoo isbitaalka ay jiifaan bukaano qaba xanuuno kala duwan.
Olole looga soo horjeedo in dib loo soo magacaabo wasiiradii Saacid oo xildhibaano wadaan